Netizen Report: Ilay Fotoana Nahafatesan’ny Aterineto Tao Ekoadaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2016 16:06 GMT
Araka ny antotan-taratasy tafaporitsaka avy amin'ny Telefonica orinasan'ny fifandraisan-davitra marorantsana Espaniola, ny fahatapahan'ny aterineto vetivety tsy ahafahan'ny Ekoadaoriana hiditra tao amin'ny Google sy YouTube no nasetrin'ny orinasa tamin'ny baikon'ny governemanta, fa tsy vokatry ny olana ara-teknika araka ny niheverana azy teo aloha izany. Naharitra 33 minitra ihany ny fahatapahana, araka ny voalaza tamin'ny antontan-taratasy tafaporitsaka. Toa tranga voarakitra voalohany momba ny fanakatonana fahatany tao Ekoadaoro izany, hoy ny Motherboard, na dia mifanaraka amin'ny filazana teo aloha aza fa manivana ny aterineto ny governemanta.
Voampanga ho “manevateva” filoham-pirenena tamin'ny fanehoan-kevitra nataony tao amin'ny Facebook ilay Tanzaniana mpiserasera Isaac Habakuk Emily. Navoaka teo ambanin'ny Lalànan'ny Heloka Antserasera Laharana faha-14 tamin'ny 2015, lalàna mampiadihevitra tao Tanzania ny fiampangana, izay manameloka ny famoaham-baovao hita fa “diso, mamitaka, mandainga, tsy marina,” ka miafara amin'ny onitra manomboka amin'ny 3 tapitrisa shillings sy/na sazy an-tranomaizina tsy latsaky ny enimbolana
Namoaka ny tatitry ny fanadihadiana vao haingana fa vondrona mpiasa mpitsikilo avy amin'ny Foibe Stratejika Ho amin'ny Filaminana sy Fiarovana ny Tanindrazana, miasa eo ambanin'ny baikon'ny Filoha Nicolás Maduro, no nihaino tsy ara-dalàna ny resaka amin'ny finday ary nisovoka ny hafatra an-tsoratra sy ny fifandraisana amin'ny mailaka eo amin'ireo mpanohitra malaza, anisan'izany i Henrique Capriles, María Corina Machado, Henry Ramos Allup, ary Julio Borges.
Ny rindrambaiko fitsikilovana kendren'ny Ekipa Mpisovoka no nampiasan'ny fitsikilovana Ekoadaoriana mba handotoana ny fitaovan'ny mpikatroka, mpitsara, ary ny politisiana manohitra ny governemantan'ny Filoha Rafael Correa, hoy ny tatitra vao haingana avy amin'ny Derechos Digitales izay mandrakitra betsaka ny zavatra ataon'ny orinasa ao amin'ny faritra. Na dia milaza aza ny Ekipa Mpisovoka fa manadihady ny mpanjifany izy mba hiantohana fa tsy misy ny fanararaotana ny fitaovany, mampiseho ny porofo fa mampiasa azy io mba hikendrena ireo tsy mitovy hevitra sy mpanohitra ara-politika ny governemanta manerana an'i Amerika Latina.
Nanambara ny fanendrena an'i Kathy Chen, mpiasan'ny Tafi-Panafaham-Bahoaka sy ny Minisiteran'ny ny Fiarovam-bahoaka teo aloha ho tale mpitantana ny Shina Goavana ny Twitter vao haingana. Noraisin'ireo mpiserasera Shinoa marobe fa mampiahiahy izany fanendrena izany, noho ny fifandraisan'i Chen amin'ny fanjakana. Mijanona mikatona ny Twitter ao Shina, saingy niakatra 340 isan-jato ny vola miditra amin'ny dokambarotra avy amin'ny tanibe tamin'ny taona lasa.
Manana sehatra ifarimbonana antserasera ankehitriny i Honduras izay natokana ho an'ny antontanisa mikasika ny fahalalahana maneho hevitra. Milaza ny Komitin'ny Fahalalahana Maneho Hevitra (C-Libre) fa manome ny fitaovana ho sehatra malalaka ahafahan'ny olona manadihady ny fahalalahana maneho hevitra ao Honduras izany. Ahitana kisarisarin'ny fibodoana, endrika fampitan-javatra, herisetra mivantana, herisetra ankolaka, mpiherisetra, toerana sy ny zavamitranga isam-bolana ny sehatra. Afaka mangataka na manome vaovao ho an'ny C-Libre ihany koa ny olona amin'ny alalan'ny fandefasana hafatra ao amin'ny tambajotra sosialy. Nanohana ny C-Libre tamin'ny fananganana ny sehatra ny IFEX.
Manoloana ny paikan'ny Zon'olombelona ho Fandrefesana ny Lalànan'ny Fizakamanana Iraisampirenena Mifanaraka Amin'ny Lalànan'ny zon'olombelona Iraisampirenena nosoratan'i Saleh Al-Sharieh, Journal of International and European Law ao Utrecht
Ekipa Mpisovoka: Rindrambaiko Mpisompatra Para La Vigilancia En America Latina, nosoratan'i Derechos Digitales
Nanampy tamin'ny fanoratana ity tatitra i Mary Aviles, Ellery Roberts Biddle, Weiping Li, Hae-in Lim, Elizabeth Rivera, sy Sarah Myers West.